Umthelela wezibuyekezo eziku-inthanethi | Martech Zone
Sisanda kuqala ukusebenza nohlu luka-Angie futhi sekuvele kusivule amehlo ukuthi mangaki amabhizinisi athola ukuholwa kuwo izilinganiso, ukubuyekezwa kanye namadili. Kumabhizinisi endawo ahlinzeka amakhasimende awo ngensizakalo enhle, izibuyekezo ezikhokhelwe ku-Angie's List ziyimali engenacala.
Ngokwe-Small Business Search Marketing Survey eyenziwe yi-American Express OPEN, amabhizinisi amancane ase-US asengathembela ekukhulumeni ngomlomo njengendlela ephezulu yokuthi abathengi babathole. Eduze nokho kuyi-Internet. Abathengi bendawo manje bathembele kakhulu kumandla enjini yokusesha lapho bethenga endaweni. Sibheka ukuthi lokhu kusho ukuthini ebhizinisini lakho elincane.
Milo, A isitholi somkhiqizo oku-inthanethi, ibeke le infographic ndawonye ikhuluma namandla ezibuyekezo eziku-inthanethi.
Tags: Uhlu luka-Angieibhizinisi lendawoi-miloUkubuyekezwa okuku-inthanethiIzibuyekezo